Harry Maguire Oo Aabbihii LABA FEEDHOOD Laga Jabiyey Ciyaartii Finalka Qaramada Yurub - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaHarry Maguire Oo Aabbihii LABA FEEDHOOD Laga Jabiyey Ciyaartii Finalka Qaramada Yurub
Harry Maguire Oo Aabbihii LABA FEEDHOOD Laga Jabiyey Ciyaartii Finalka Qaramada Yurub
Aabaha dhalay difaaca reer England ee Harry Maguire ayaa laba feedhood laga jabiyey kulankii finalka Euro 2020 ee Talyaanigu rikoodheyaasha koobka kaga qaaday Ingiriiska.
Alan ayay dhexda gashadeen taageereyaasha xulka Ingiriiska ee joogay bannaanka garoonka Wembley ka hor intii aanay bilaabmin ciyaartii Axaddii, waxaana soo gaadhay dhaawacyo jabniin lafaha feedhaha ah, iyadoo waliba uu halis u galay in naqasku ku dhego.
Taageereyaal tiro badan oo aan haysanin tigidhka daawashada ciyaarta ayaa si qasab ah kusoo galay garoonka iyagoo soo jiidhay ciidanka ammaanka, waxaanu Maguire aabbihii ku jiray dadkii haystay tigidhka ee iyagoo garoonka soo gelaya ay jiidheen taageereyaasha dhallinyarada u badnaa ee sida qasabka ah garoonka kusoo galay.
Harry Maguire ayaa sheegay, in aabbihii oo 56 jir ah uu ku sigtay in naqasku ku dhego markii ay dul-mareen taageereyaashu, waxaanu xaqiijiyey in uu ka jabay laba fadhood xilli uu bannaanka Wembley joogay oo uu garoonka ku socday.
“Aabahay waa la dulmaray.” Ayuu yidhi Maguire oo intaas raaciyey: “Waxay ahayd xaalad xun, waanu naxay. Waxa uu sheegay inuu cabsaday.”
Harry Maguire oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas raaciyey: “Ma doonayo in uu qofna la kulmo arrinta noocan oo kale ah kulan kubbadda cagta ah. Aabahay nasiib ayuu lahaa sababtoo ah ciyaar walba wuxuu soo kaxaysan jiray ina-adeerkay ama mid ka mid ah carruurtayda oo uu garabka kusoo qaadi jiray. Waan ku faraxsanahay in aanay carruurtaydu aanay imanin garoonka.”